အိုင်စီဂျေအရေး အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေအတွင်း ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ရှိ
အိုင်စီဂျေအရေး အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေအတွင်း ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်...
2 ธ.ค. 2562 - 22:23 น.
အပစ်ရပ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) အစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်က နေ ၅ ရက်အထိ သုံးရက်ကြာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီး ဒီအစည်းအဝေးမှာ အိုင်စီဂျေမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲထားတဲ့အရေး ဆွေးနွေးဖို့လည်း ရှိနေပါတယ်။
အိုင်စီဂျေ က တရားစွဲတာဟာ နိုင်ငံကို တရားစွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက် အပစ်ရပ်အဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့လုံးက ဒါဟာမဖြစ်သင့် ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရှိတယ်လို့ အကဲခတ်ရတယ်လို့ ရခိုင်လွတ်မြေက်ရေးပါတီ ALP ဒုဥက္ကဋ္ဌ ခိုင်စိုးနိုင်အောင်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံကို တရားစွဲတာဖြစ်လို့ အစိုးရကို ကူညီပေးသင့်တာ အကူအညီပေးဖို့လိုတယ်လို့ သူက ဆက် ပြောပါတယ်။
" ဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာ ဆယ်ဖွဲ့ရဲ့သဘောထားကို ကျွန်တော် အကဲခတ်ကြည့်ရသလောက် အိုင်စီဂျေ မှာ တရား စွဲတာဟာ နိုင်ငံတော်ကို တရားစွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံသားတွေနစ်နာတယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်ကို တရားစွဲတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် လက်ခံမယ့် သဘောမရှိကြဘူး" လို့ PPST ရဲ့ ဒုတိယခေါင်းဆောင်နေရာမှာလည်း ရှိတဲ့ခိုင်စိုးနိုင်အောင်က ပြောပါတယ်။
ဒီမနက် အစည်းအဝေးအဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ PPST ရဲ့ ယာယီခေါင်းဆောင် ဖြစ်တဲ့ RCSS အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်ကလည်း အိုင်စီဂျေ အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အိုင်စီဂျေ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲထားမှုကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းဖို့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာဟာ အစိုးရက တာဝန်ယူတယ် ၊ တာဝန်ခံ တယ်ဆိုတာကို ပြသခြင်းဖြစ် တယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တစ်ဖက်က သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံမှု ဘယ်လောက်အထိ ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ထည့်တွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှာ ဆက်ဆွေးနွေးမယ့် PPST အစည်းအဝေးမှာ အိုင်စီဂျေ အရေး ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ပအိုဝ်းအဖွဲ့ ဦးဆောင်နာယက ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အိုင်စီဂျေ မှာ ခုလို နိုင်ငံကို တရားစွဲတဲ့အပေါ် ALP ပါတီရဲ့သဘောထားဆိုရင်တော့ နိုင်ငံသားအားလုံးကို ထိခိုက်နစ်နာလို့ လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ခိုင်စိုးနိုင်အောင်က ပြောပါတယ်။
"မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ခုလုံး တိုင်းရင်းသားတွေရော ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်း သား အားလုံးကို ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့အတွက် ဒါတော့ ကျွန်တော်တို့ ALP အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ဘူး" လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီရပ်တည်ချက်နဲ့ပဲ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှာ ဆွေးနွေးမယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါ တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ် သူက တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်တဲ့အပေါ်မှာ မှတ်ချက်ပေးစရာမရှိ ဘူးလို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ အိုင်စီဂျေ မှာ သွားရောက်တရားရင်ဆိုင်တဲ့အခါ အချက်အလက်တွေ အထောက်အထားတွေကို ပြည့်စုံအောင်စုဆောင်းပြီး ပြင်ဆင် ရင်ဆိုင်သင့်တယ်လို့ ဦးခိုင်စိုးနိုင်အောင်က ပြောပါတယ်။
အိုင်စီဂျေ အရေး အပစ်ရပ်ဆယ်ဖွဲ့ထဲက ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တစ်ဖွဲ့သာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပြီး မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစား လိုက်နာပြီး ဖြေရှင်းဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက အစ္စလာမစ်ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) ကိုယ်စား မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ( အိုင်စီဂျေ) မှာ တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ သဟေ့ဂ်မြို့က တရားရုံးခွင်
ဒါကို အိုင်စီဂျေ ရုံးစိုက်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ သဟေ့ဂ်မြို့က အဲဒီတရားရုံးမှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်ကစလို့ အမှုကို ကြားနာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှုကို နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ပြီး သွားရောက်ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သွားရောက်ဖြေရှင်းမှာကို ဝနဲ့ မိုင်းလားအဖွဲ့က ထောက်ခံထားပြီး ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP) ကလည်း အစိုးရအပေါ် အကောင်းမြင် သဘောထားရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေ၊ တီအန်အယ်လ်အေနဲ့ MNDAA တို့ ကတော့ တပ်မတော်ကို တရားစွဲဆိုတဲ့အပေါ် ထောက်ခံတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အိုင်စီဂျေအရေး အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေအတွင်း ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ရှိ